जवानी फिर्ता माग्दै अदालत पुगेपछि... | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
जवानी फिर्ता माग्दै अदालत पुगेपछि…
मंसिर १८ गते, २०७५ - १४:१७
प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको उमेर घटाउन चाहने कतिजना हुनुहुन्छ ? कतिपयलाई त आफू नागरिकता अनुसार बुढो भएको विश्वास लाग्दैन हैन ?
तर कोर्टले भने कानुनीरुपमा यसरी उमेर घटाउँदा यसको असर शैक्षिक प्रमाणपत्रदेखि नागरिकता र अन्य कागजातमा पर्ने र ती सबैलाई परिवर्तन गर्नु कानुनी र सामाजिकरुपमा निकै जटिल हुने बतायो । “तर तपाई चालिस वर्षे युवा भएको अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ र सोही अनुरुपको व्यवहार पनि । यसमा कुनै रोकटोक हुँदैन ।” कोर्टले फैसलामा भनेको छ । एजेन्सी
मंसिर १८ गते, २०७५ - १४:१७ मा प्रकाशित